Soomaaliya iyo Itoobiya oo golaha ammaanka QM ka codsaday in cunaqabateynta laga qaado Eritrea – Somali Broadcasting Service
Soomaaliya iyo Itoobiya oo golaha ammaanka QM ka codsaday in cunaqabateynta laga qaado Eritrea
Axmed Ciise Cawad, oo xarunta golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay ka jeediyay khudbada madaxweynaha Soomaaliya.
Wasiirrada arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo Itoobiya oo khudbad ka jeediyay xarunta golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa codsaday in cunaqabateynta saaran dalka Eritrea laga qaado si loo gaaro gobolka Geeska Afrika oo xasilloon.
Axmed Ciise Cawad, oo xarunta golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay ka jeediyay khudbada madaxweynaha Soomaaliya, wuxuu sheegay in la joogo waqtigii cunaqabateynta saaran dalka Eritrea laga qaadi lahaa,halka wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya,Workneh Gebeyehu uu sheegay dalkiisa inuu codsanayo in dunidda loo furfuro Eritrea oo cunaqabateynta saaran laga qaado.
Itoobiya iyo Eritrea ayaa dib usoo nooleeyay xiriirkooda,kaddib heshiis ay labada dal ku gaareen dalka boqortooyada Sacuudiga, waxaana heshiiska mar kale uu dib usoo celiyay rajada Eritrea ee ku aaddan in laga qaado cunaqabateynta saaran.
” Eritrea waxay muddo dheer ku dhibtooneysa cunaqabateyn aan sharci ahayn.” ayuu yiri Cismaan Saalax, wasiirka arrimaha dibadda Eritrea oo khudbada uu ka jeediyay xarunta golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay ku dheeraaday cunaqabateynta dalkiisa saaran.
Wasiirka arrimaha dibadda Jabuuti, Maxamuud Cali Yuusuf oo khudbada madaxweynaha Jabuuti xarunta golaha ammaanka ka jeediyay ayaan sameynin codsiga ah in cunaqabateynta laga qaado dalka Eritrea.
Hoggaamiyayaasha dalalka ku yaalla bariga Afrika ee Soomaaliya,Itoobiya,Eritrea iyo Jabuuti ayaan sannadkan tagin xarunta golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay,waxaana shirka ku matalay wasiirrada arrimaha dibadda.
Author adminmasterPosted on October 1, 2018 Categories Hot Topics / War Cusub, News, World
Previous Previous post: Wakiilka cusub ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya oo xilka la wareegay
Next Next post: Mareykanka oo sheegay in Duqeyn uu la eegtay Saldhig Al shabaab ku leeyihiin Jubbada hoose